raso Seeraar ayaa la filayaa in la heli karo in Singapore dhamaadka sanadka - Blockchain News
Laga yaabaa 4, 2018 admin
raso Seeraar ayaa la filayaa in la heli karo in Singapore dhamaadka sanadka
Tngem, shirkad crypto jeebka hardware ayaa bilaabay sale duuliyaha raso ay Seeraar suuqa Singapore.
Tangem ujeedadiisu tahay in la sameeyo xawaalad jirka isticmaalaya cryptocurrency more yaqaan macaamiisha noob, oo qorshaynaysa in ay soo saaraan malaayiin qoraal ah by dhamaadka sanadka.
In Singapore, dal kuwaas oo xeerarka ay yihiin kuwo aad taageero ah cryptocurrency iyo technology blockchain labada, qoraalada laga heli karaa iibsan at laanta Suntec City ee design silsilad dukaanka Megafash doonaa.
Notes The, taas oo ku iman doono madaahibta ah 0.01 iyo 0.05 BTC ($92 iyo $463 siday u kala horreeyaan), waa boorsada hardware dhab keensatay-sida.
Blockchain News 17 January 2018
deVere Group oo bilaabay app ganacsiga cryptocurrency
Nigel Green, CEO of ...
Guddi muhiimka ah ee A ...
Post Previous:Coinbase ayaa qorshaynaysa in ay xafiis cusub ka furi Chicago
Post Next:12 bangiyada Chinese blockchain loo isticmaalo 2017
murlo ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 18, 2018 at 5:38 AM
Schoebel ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 31, 2018 at 3:29 AM
Hag ayaa sheegay in: